Semalt: Izinhlobo Ezihlukene ZamaTrojans Futhi Impumelelo Yabo
uFrank Abagnale, i-8 (Semalt iMenenja yokuphumelela kwamakhasimende, uthi iTrojan idalwe ukweba ulwazi lwebhange kubasebenzisi be-intanethi. Lezi bots zisabalalisa nge-imeyili, izihluthulelo kanye nezikhangiso ze-pop-up. Isebenzisa izigidi zama-zombie amakhompyutha ekusebenzeni ukufakwa kwe-keystroke, nokuhlasela okubhekiswe kuma-akhawunti asebhange kanye nokweba idatha yangasese. I-Trojans iqoqa ulwazi, kanti i-FBI idalule ukuthi ithola i-cybercriminal esetshenzisile uZey ngokuthatha okungaphezu kwamaRandi ayizigidi ezingu-20 ezivela emabhange aseCanada.
I-Trojans ingahlukaniswa ngezigaba ezahlukene ngokusekelwe kokusebenza kwayo nezinhlobo zokuhlaselwa.
ITrojani ye-backdoor inikeza abaduni ithuba lokulawula idivayisi yakho nokuyekethisa inani elikhulu lamakhompyutha. Ivumela kalula umdali wayo ukuba enze imisebenzi ehlukahlukene ayithandayo kakhulu, kuhlanganise ukuthumela, ukuqala, ukususa nokuthola amafayela, ukuvuselela amakhompyutha nokubonisa idatha. I-Trojans ye-backdoor isetshenziselwa kakhulu ukuhlanganisa amaqembu amakhompyutha ahlukumezekile kanye nohlobo lwe-zombie noma amanethiwekhi we-botnet.
Ukuxhaphaza yi-Trojan equkethe idatha namakhodi ezinonya futhi ithatha izinzuzo zokukhubazeka ngaphakathi kwikhompyutha yakho noma idivayisi yeselula.
I-rootkits yakhelwe ukufihla izinto ezithile nemisebenzi emshinini wakho. Inhloso yabo eyinhloko ukusabalalisa izinto ezinobungozi kuwebhu yonke yomhlaba bese wandisa isikhathi lapho izinhlelo zakho zilayisha kahle.
Loluhlobo oluthile lweTrojan olusiza abaduni beba idatha ye-akhawunti yabasebenzisi abahlukile. Abaduni basebenzisa lolu lwazi ngokuba imali kumabhange ase-intanethi, amakhadi esikweletu namakhadi nokukhokha e-e izinhlelo.
ITrojan-DDoS inesibopho sokuqhuba konke ukuhlaselwa kwe-DoS (Denial of Service) ngokumelene namakheli ewebhu ahlosiwe. Ithumela izicelo eziningi kubasebenzisi futhi ifaka inombolo enkulu yamadivayisi wekhompyutha.
Kufanele uqaphele njalo ukusebenza kanye nemisebenzi yesistimu yakho ukuze ukuziphatha okungavamile kungaqedwa. Wonke amathuluzi akho kanye nesofthiwe kufanele ibuyekezwe ikakhulukazi ukuvikela kwakho.
7. I-Trojan Vigilance
Abasebenzisi kufanele baqeqeshwe ukugwema emisebenzini ebafaka engozini yokutheleleka kwe-bot kanye nokuhlaselwa kwe-malware.
8. I-SMS yeThrojani
I-SMS ye-Trojan izokubiza imali futhi ithumele imiyalezo evela enombolweni yakho yeselula kuya ezinombolo zefoni ezingeni eliphezulu zansuku zonke.
iTroyspy spy yizinhlelo ezifakwe kwizinhlelo zakho ngokuzenzakalelayo futhi zikhohlise amagama akho angukhiye, thatha ama-skrini bese uthola uhlu lwazo zonke izinhlelo zakho zokusebenza.
I-antivirus enconyiwe, anti-Trojan, namathuluzi okulwa ne-malware